Dmenu na Rofi: Ihe ntinye oru oma nke oma nke umuaka | Site na Linux
Ingga n'ihu na isiokwu nke Ndị na-ebupụta ngwa (ndị na-amalite), taa anyị ga-ekwu maka ihe ọzọ 2 ejirila, mana ọ kachasị na Ndị na-ahụ maka windo (WMs), karịa n'ime Ebe Desktọpụ (DEs). Ndị a 2 ka a na-akpọ: Dmenu na Rofi.
Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama na, dị ka a ga-ahụ na onyonyo n'okpuru, linear na mfe launchers dị ka Dmenu y Rofi enwekwara ike iji ụfọdụ OA dị ka XFCE. Na Anglịkan, nke ahụ bụ, ndị na-eme ihe nkiri na ndị dị ike dịka Albert, Kupfer, Ulancher na Synapse nwere ike ije ozi na ụfọdụ n'ime WM ẹdude ndị, nke m maara n'ezie, ebe m na-anwale ọtụtụ n'ime ndị a launchers onwe m na ụfọdụ WM.
Maka ndị na-ahụbeghị na / ma ọ bụ gụọ akwụkwọ anyị gara aga na nke kachasị nso banyere ndị ọzọ Ndị na-ebupụta ngwa (ndị na-amalite), ị nwere ike ịnweta ha, mgbe ị gụsịrị akwụkwọ a, site na ịpị njikọ ndị a:
Chetakwa na e nwere ọtụtụ ndị ọzọ, Ndị na-arụ ọrụ na-adịghị arụ ọrụ, dị ka:
Avant Window akwọ ụgbọ mmiri (Awn)https://launchpad.net/awn
DmenuEbe nrụọrụ weebụ: https://tools.suckless.org/dmenu/
GNOME MeeWeebụsaịtị: https://do.cooperteam.net/
Gnome achịchaEbe a: https://schneegans.github.io/gnome-pie.html
KrunnerEbe nrụọrụ: https://userbase.kde.org/Plasma/Krunner
MbidoEbe nrụọrụ weebụ: https://www.launchy.net/index.php
Mbelata Plasma: https://userbase.kde.org/Plasma/Kickoff
Ihe ngosiEbe e si nweta ya: https://ulauncher.io/
1 Ndị nkuzi maka WMs: Dmenu na Rofi
Ndị nkuzi maka WMs: Dmenu na Rofi
Nke a ìhè na ọtọ launcher a kọwara na ya ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, dị ka ndị a:
"Nchịkọta dị ike maka X, nke emere maka dwm. Ejiri ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ihe akọwapụtara nke ndị ọrụ nke ọma".
Dị ka ndị ọzọ launchers WMs, Dmenu dịkwa mfe ma rụọ ọrụ, ukwuu mgbanwe na customizable, na nkenke, mepee ohere nke imeghari ma ọ bụ gbakwunye na mgbakwunye nke onwe ma ọ bụ nke atọ, site na mmemme, edemede na / ma ọ bụ dị mfe iwu pụrụ iche mgbe ahazi ka amalitere n'ime WM o OA ebe a ga-egbu ya.
Na ngalaba edemede tinye-ons ụfọdụ bara ezigbo uru ma na-atọ ụtọ nwere ike ibudata na weebụsaịtị ya. Ọ bụ ezie na ị na-emewanyewanyewanye omenala, ụfọdụ koodu nke e si na ọtụtụ nweta faịlụ nhazi (dotfiles) dị na Internetntanetị, nke ndị ọrụ nwere mmụọ na obodo nke onye na-agba ọsọ na-ewu ewu.
Onwe m, enwere m mmasị ijikọta ya na Ngwa Fzf, nke bu izugbe uzo iwu ajuju search engine. Maka ihe m na-etinye Dmenu na Fzf na otu iwu ozugbo, dị ka egosiri n'okpuru:
M ike ha dị ka ndị a, na WM i3 n'iji faịlụ kwekọrọ na ụzọ: «.config/i3/config»
Na iji a bara uru ntọlite ndị na-esonụ dị na :ntanetị:
N'ikpeazụ, ọ bara uru ịkọba nke ahụ ugbu a Dmenu na-aga maka mbipute ya 5.0, nke ewepụtara n'oge na-adịbeghị anya (02/09/2020), dịka e dekọrọ na ya Ebe nrụọrụ gọọmentị na ikpo okwu Git. Ya mere, ị nwere ike ibudata ma jiri ụdị ọhụụ a hụ iji uru ya kachasị dị ugbu a, ọ bụrụ na ịchọghị iji Dmenu site na nchekwa nke Distro gị.
A kọwara onye na-esote ọhụụ nke a dị mfe na nke ọ bụla ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, dị ka ndị a:
"Onye na-agbanwe windo, ngwa ngwa, na nnọchi dmenu".
Na ihu ọma, Rofi enwetala ya ugbu a egosipụta ma ọ bụ ego nke mfe wuru na-arụmọrụ, n'ihi na ọ malitere dị ka a mmepụta oyiri nke Onyeka Onwenu, dere Egwuregwu Sean, wee bụrụ Rofi dị ugbu a site na itinye ọtụtụ ederede nke atụmatụ ndị ọzọ, dị ka ngwa ngwa na ssh launcher, na-enye ya ohere ime dị ka onye nnọchi maka Mpempe menu na / ma ọ bụ Dmenu.
N'ihi ya, Rofi, dika ya Dmenu, ị nwere ike inye onye ọrụ njedebe a GNU / Linux Distro, ndepụta ederede nke nhọrọ nke enwere ike ịhọrọ otu ma ọ bụ karịa, n'agbanyeghị ma ha bụ iwu iwu maka igbu nke ngwa, nhọpụta windo ma ọ bụ nhọrọ nke ederede mpụga.
Rofi Ọ dị mfe ịwụnye, ebe ọ bụ n'ọtụtụ nchekwa nke Nkesa GNU / Linux. Dịka ọmụmaatụ, site na inye iwu dị mfe n'okpuru, etinyego m ya Linux MX:
Ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị gị GitHub, na Bekee, ọ bụ ihe ọmụma zuru ezu zuru ezu, nke mere ka ọ bụrụ ngwa ngwa ederede ederede nke dị mfe na ngwa ngwa. Otú ọ dị, dị ka na Dmenu, ị nwere ike ịchọta na ịntanetị, nhazi ndị na-atọ ụtọ ma ọ bụ nhazi nke iji na ọdịdị iji nwalee. I nwekwara ike ileta ndị a pụrụ ịdabere na ya mgbe niile Ogba Wiki ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara Rofi.
N'ikpeazụ, dịka ị pụrụ ịhụ na foto abụọ gara aga, Dmenu na Rofi enwere ike itinye ya n'ọrụ, dịka ọmụmaatụ, na a DE dị ka XFCE.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere ndị a 2 ukwuu tụrụ aro na ama mara ezigbo ngwa launchers akpọ «Dmenu y Rofi», nke ọtụtụ ndị ọrụ obodo na-ejikarị gbasara ha Ndị na-ahụ maka Ohere (WMS) kama ndị ọzọ, dị ka Ulauncher, Synapse, Albert na Kupfer; bụ nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Dmenu na Rofi: 2 Ezigbo ndị na-ebupụta ngwa maka WMs
M na-eji dMenu-akp (a zuru ezu dMenu).
N'aka nke ọzọ, uru dMenu (ma eleghị anya kwa Rofi), n'adịghị ka ndị ọzọ na-agbapụta, bụ na ọ na-eri naanị akụ (na obere) mgbe ị na-eji ya. Ndị ọzọ na-eri akụrụngwa ọbụlagodi ma ị naghị eji ha.
Ekele, Pedruchini. Daalụ maka okwu gị na onyinye gị. Amaghị m Dmenu Extended, yabụ ana m ahapụ njikọ ahụ na websaịtị gọọmentị maka ndị nwere mmasị:
Agbalịrị m ọtụtụ n’ime ndị ahụ ma eziokwu ekwenyeghị m, enwere ihe na-adabaghị m mgbe niile. Naanị nke m na-eji, amasị m ma nwee mmetụta ọsọ ọsọ, nkasi obi na nke ahụ adịghị na ndepụta a, bụ jgmenu, yana gmrun.
Ekele, M13. Daalụ maka okwu gị na onyinye gị. Aga m achoputa banyere nke i gwaworo anyi.
Ha na-atụ aro iwepụ ma wepu usoro Fedora SCP
A tọhapụrụ LXQt 0.16 na ndị a bụ mgbanwe ya kachasị mkpa